कसरी एउटी महिलालाई तपाइँसँग प्रेममा पार्ने ▷ ➡️ खोज अनलाइन ▷ ➡️
कसरी एक महिला तपाईं संग प्रेम मा गिर्न। भनिन्छ कि मोहको अवस्था हाम्रो जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षण हो। एक महिला संग प्रेम मा पर्नु धेरै जटिल छ, र यसलाई प्राप्त गर्न तपाईंले आफ्नो सबै हतियारहरू बाहिर निकाल्नुपर्छ। तर तपाईं पनि उनको द्वारा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, र यो हुनबाट रोक्नको लागि, हामीले तपाईंको सपनाको महिलालाई उनको राम्रो आधा हेर्नको लागि केही आधारभूत सुझावहरूको साथ यो लेख सिर्जना गरेका छौं। भाग्यले साथ दिओस्!
1 कसरी एउटी महिलालाई तपाईसँग चरण-दर-चरण प्रेममा पार्ने
1.1 1. यसलाई सुन्नुहोस्
1.2 2. एक सज्जन हुनुहोस्
1.3 3. महिलालाई तपाईसँग प्रेम गर्नको लागि राम्रो लुगा लगाउनुहोस्
1.4 4. घमण्ड नगर्नुहोस्
1.5 5. यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्
1.6 6. उसलाई पहिलो मिति पछि कल गर्नुहोस् उसलाई तपाईसँग प्रेम गर्नको लागि
1.7 7. बिस्तारै जानुहोस्
1.8 8. आफ्ना साथीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्
1.9 9. तपाईंको सम्बन्धलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्
1.10 10. रोमान्टिक हुनुहोस् ताकि एउटी महिला तपाईसँग प्रेममा पर्छन्
1.11 11. आफ्नो परिवारलाई यो परिचय दिनुहोस्
कसरी एउटी महिलालाई तपाईसँग चरण-दर-चरण प्रेममा पार्ने
कुनै पनि महिला अर्कीजस्तै हुँदैनन्, त्यसैले धेरै पुरुषहरू डेटको लागि सोध्दा डराउँछन्। उनीहरूलाई थाहा छैन कि कसरी व्यवहार गर्ने, कि यो महिलाले यो मन पराउन सक्छ र उनीहरूले सोच्छन् कि उनीहरूले यो प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछैनन्।
अर्को हामी तपाईंलाई केही आधारभूत सुझावहरू दिनेछौं जसले तपाईंलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ एक महिला तपाईं संग प्रेम मा पर्न पाउनुहोस्।
1. यसलाई सुन्नुहोस्
सबै महिलाहरु कुरा गर्न र सुन्न मन पराउँछन्। पहिलो डेटमा तपाईले अनगिन्ती विषयहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाई उसलाई विशेष महसुस गराउन चाहनुहुन्छ भने, उसले तपाईलाई भनेको सबै कुरामा ध्यान दिनुहोस् र उनीसँग कुराकानी गर्नुहोस्। यो राम्रो सुरुवात हो र विचारको आदानप्रदान मार्फत तपाईंलाई जोड्नेछ।
2. एक सज्जन हुनुहोस्
जब हामी एक सज्जन हुनुको बारेमा कुरा गर्छौं यसको मतलब यो होइन कि तपाईं एक आकर्षक राजकुमार हुनुपर्छ। एक सज्जन हुन को लागी तपाईं ऋणी हुनुहुन्छविनम्र, कोमल र विचारशील तरिकामा कार्य गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, उसको लागि रेस्टुरेन्ट वा कारको ढोका खोल्नुहोस् र मितिको समयमा श्राप शब्द वा अभिव्यक्तिहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। साथै, यौन उन्नति गर्ने बारे सोच्न पनि नदिनुहोस् किनकि तिनीहरू ठाउँबाट बाहिर हुनेछन् र एक सुन्दर तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नेछन्। तिमी एकअर्कालाई चिन्दै छौ, तिमी जोडी होइनौ।
3. महिलालाई तपाईसँग प्रेम गर्नको लागि राम्रो लुगा लगाउनुहोस्
कुनै पनि महिलाले सोच्दैनन् कि उनको जीवनमा फोहोर लुगा लगाउने र दुर्गन्धित प्रकारको पुरुष हो। पुरुषहरू सफा सेभन वा राम्ररी हेरचाह गरिएको दाह्री, सुगन्धित, सफा कपाल भएको र तिनीहरूको संयमताको लागि बाहिर खडा लुगाहरू विवरणहरू हुन् जसले तपाईंले मन पराउने महिलाबाट धेरै दृष्टिकोण प्राप्त गर्दछ।
4. घमण्ड नगर्नुहोस्
त्यहाँ पुरुषहरू छन् जो आफ्नो काम वा भौतिक सम्पत्ति देखाउन मन पराउँछन्, तर यो तपाईंले जित्न चाहेको महिलाको अगाडि गर्नु पर्ने कुरा होइन। उनी पनि चाहँदैनन् कि तपाइँसँग नभएका चीजहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, किनकि कुनै पनि अवस्थामा तपाइँ उसलाई प्रभावित गर्न सक्षम हुनुहुन्न।
5. यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्
यदि तपाईंले उत्तम महिला फेला पार्नुभएको छ र तपाईं उसलाई तपाईंसँग प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई आफ्ना साथीहरूसँगको कुराकानीमा समावेश गर्नुपर्छ। उसलाई पनि चासो लाग्ने विषयहरूको बारेमा कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र उसलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न दिनुहोस्। कार, ​​फुटबल, र अन्य महिलाहरूको बारेमा कुरा गर्नु निश्चित रूपमा प्रश्न बाहिर छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंका साथीहरूलाई पनि आफ्नो कम्पोजर कसरी राख्ने भन्ने थाहा छ र कुरा गर्नका लागि विभिन्न विषयहरू छन्।
6. उसलाई पहिलो मिति पछि कल गर्नुहोस् उसलाई तपाईसँग प्रेम गर्नको लागि
यदि तपाइँ उसलाई तपाइँको पहिलो डेट पछिको दिन कल गर्नुहुन्छ भने, उसले तपाईसँग प्रेम गर्ने सम्भावना धेरै बढेको छ। भ्रामक खेल नगर्नुहोस्, यो बेकार छ। तपाईंले के गर्नु पर्छ उहाँ कस्तो गरिरहेकी छ भनेर हेर्नको लागि उहाँलाई कल गर्नु हो, उहाँलाई भन्नुहोस् कि तपाईंले उहाँलाई भेट्न मन पराउनुभयो र उहाँलाई फेरि भेट्न चाहनुहुन्छ। यदि उसले तपाईलाई अझ राम्रोसँग चिन्न चाहन्छ भने, उसले निमन्त्रणा स्वीकार गर्नेछ। उसलाई अभिभूत नगर्नुहोस् दोस्रो मिति फोन, सामाजिक सञ्जाल वा इमेल मार्फत हजार सन्देशहरू नआउन्जेल।
7. बिस्तारै जानुहोस्
धेरैजसो पुरुषहरू पहिलो डेट पछि, केहि थप घनिष्ठ हुने आशा गर्छन्। तर घनिष्ठ सम्बन्धलाई समय, सम्मान, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सबै भन्दा माथि उनको सम्मान गर्नुहोस्। एक व्यक्ति जसले यसलाई ध्यानमा राख्छ, निर्णय र अर्को व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको समयलाई सम्मान गर्दछ।
8. आफ्ना साथीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्
तपाईंको साथीहरूको सर्कल थाहा पाउनु लगभग एक अनुष्ठान हो, र त्यहीँबाट तपाईंले तिनीहरूबाट अनुमोदन वा अस्वीकृति पाउनुहुनेछ। यो उनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले विनम्र र मैत्री हुनुहोस्। तपाईं वास्तवमै को हुनुहुन्छ भन्ने डर बिना तिनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। अन्तमा, सकेसम्म पारदर्शी हुनु तपाईंको लागि राम्रो कुरा हो।
9. तपाईंको सम्बन्धलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्
जब तपाइँ एक महिला संग बस्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईं सम्बन्धबाट के आशा गर्नुहुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि तपाइँ उनीसँग भविष्य देख्नुहुन्न भने, तपाइँको सगाई समाप्त गर्नुहोस्, तर दुख वा सान्त्वनाबाट बाहिर नजानुहोस्। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं यसलाई सधैंभरि आफ्नो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, विवाह गर्नुहोस्। यो एकदम सजिलो छ। महिलाहरू आफू कहाँ पाइला चालेका छन् भनी जान्न रुचाउँछन्।
10. रोमान्टिक हुनुहोस् ताकि एउटी महिला तपाईसँग प्रेममा पर्छन्
रोमान्टिक हुनु चिज हुनु होइन। रोमान्टिकवाद हो द्वेषपूर्ण कार्यहरूको मिश्रण, रेस्टुरेन्टको बिल तिर्ने जस्तै, थोरै आश्चर्यका साथ उसलाई फूल दिनदेखि लिएर कुनै कारण बिना नै उसलाई अरूसँग आफ्नो प्रेमिकाको रूपमा परिचय गराउन सक्छ (यदि उनी साँच्चै हो भने)।
11. आफ्नो परिवारलाई यो परिचय दिनुहोस्
आफूले माया गर्ने महिलालाई आफ्नो परिवारसँग परिचय गराउनु भनेको सगाईमा छाप लगाउनु जस्तै हो। त्यसोभए यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि उहाँ तपाइँको जीवनको महिला हुनुहुन्छ भने, यसको लागि जानुहोस्। सबैले एकअर्कालाई चिन्नका लागि औपचारिक खाजा वा बेलुकीको खाना तयार गर्नु आवश्यक छैन। मात्र यसलाई आफ्नो साझेदारको रूपमा लगाउनुहोस् पारिवारिक पुनर्मिलन वा पार्टीमा। यो अधिक आराम छ र सबैलाई भेट्न तपाईं असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्न। तर याद गर्नुहोस् कि उसलाई कुनै पनि समयमा एक्लै नछोड्नुहोस्।
यदि तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ र एउटी महिलालाई तपाईंसँग प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको व्यक्तित्वमा यी सबै गुणहरू समावेश गर्ने तरिकाको विकास गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई आश्वासन दिन्छौं कि तपाईंको सपनाको महिलाले तपाईंसँग डेट गर्न प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछैनन् र, आशा छ, सबै तपाईंको साथमा छ।
यदि तपाईं आफ्नो ज्ञान बढाउन जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, को बाँकी लेखहरूमा जानुहोस् खोजी गर्नुहोस्